Dad abaarta ka soo barakacay oo gaajo ugu dhintay Muqdisho
Photo | Arbacoy Doojaal oo ninkeeda uu ka mid yahay dadka gaajada u dhintay/Munasar Maxamed/Ergo
(ERGO) - Sagaal qof oo afar ay carruur ahayd ayaa toddobaadkii hore gaajo ugu dhintay xerada lagu barakacay ee Daryeel ee magaalada Muqdisho. Waxay waayeen wax ay cunaan, kaddib markii uu hakad galay raashin bisil oo laga qeybin jiray xerada oo ahaa waxa keliya ee ay nolol ahaan ku tiirsanaayeen. Tirada intaas la eg in ay gaajo ugu dhintaan magaalada Muqdisho oo saldhig u ah dowladda, hay’adaha kala duwan ee ka shaqeeya gargaarka iyo ururrada aan dowliga ahayn waxay abuureysaa walaac hor leh.
Tan iyo 30-kii Abriil ayuu hakad ku jiray raashinkaas sida ay Raadiyo Ergo u sheegtay Arbacoy Doojaal Axmed oo ninkeeda oo 52 jir ahaa uu gaajada u dhintay 12-kii May. “Waxba ma uusan cunin labo toddobaad. Wixii yar ee la helo aniga iyo carruurta ayuu noo dhaafi jiray,” ayay tiri. Waxay Raadiyo Ergo u sheegtay in ay mararka qaar cunto bisil ka doonan jireen xero kale oo lagu magacaabo Caanooley oo ku taalla isla degmada ay joogaan ee Kaxda, taas oo ay wax ka bixiso hay’ad samafal oo aanay magaceeda noo sheegin.
Arbacoy oo haysata labo carruur ah ayaa xeradan ku biirtay labo bilood ka hor markaas oo ay ka soo barakacday deegaanka Sablaale ee gobolka Shabeellaha hoose. Waxay Muqdisho u yimaadeen si ay u helaan gargaar bani’aadannimo, maaddaama ay abaartu qallajisay beer ay noloshooda ku tiirsaneyd.
Xerada Daryeel waxaa raashinka bisil oo ahaa digir iyo bariis la isku kariyay ka sokow laga bixin jiray cunno ceyriin ah oo isugu jirta baasto, caano iyo buskud lagu nafaqeeyo carruurta. Ismaaciil Maxamed Nuur oo gabadhiisa oo labo jir ahayd ay gaajada u dhimatay ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in shan maalmood aysan waxba cunin marka laga reebo biyo ay ka cabaan hal tubbo oo ay wadaagaan 1,500 oo qoys oo xerada deggan. “Wax xanuun ah uma geeriyoon, balse waxaan u waynay caano iyo raashin,” ayuu yiri.
Maxamuud Sheekh Xasan oo ah guddoomiyaha xerada Daryeel ee uu magacaabay maamulka gobolka ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in dadka halkaas ku dhibaateysan ay yihiin qoysas isugu jiray beeraley iyo xoolo-dhaqato bilihii la soo dhaafay ka soo barakacay gobollada Shabeellaha hoose iyo Bay.
Xeryaha kale ee ku yaalla degmada Kaxda waxaa raashin ku kariya hay’ado iyo guddiyo dadka deegaanka ah oo lacag ay raashin ku iibiyaan ka ururiya dadka gudaha. Laakiin Daryeel oo ah xerada ugu weyn kuwa ku yaalla Kaxda waxaa si gaar ah mas’uul uga ah Maamulka gobolka Banaadir oo dadka soo barakacay dejiya, diiwaangeliya, isla markaana la socda xaaladdooda.
Guddoomiyaha Guddiga Qaran ee Gurmadka Abaaraha, Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in ay horay maamulka gobolka ugu wareejiyeen lacag gaaraysa $250,000 si ay wax uga qabtaan dhibaatada haysata dadka ay abaarta saameysay ee jooga Muqdisho. Wuxuu xusay in ay la yaab ku noqotay maqalka warka dadka gaajada ugu dhintay magaalada.
Sheekha ayaa tilmaamay in uu guddigoodu xoogga saaray dadka ku dhibaateysan gobollada ka baxsan caasimadda, iyaga oo maamulka gobolka Banaadir ku halleeyay wax u qabashada dadka imaanaya Muqdisho.
Guddoomiyaha xerada ayaa dhankiisa xusay in markii ay arkeen dadka gaajada u dhimanaya ay billaabeen inay subixii raashin aan badneyn ka kariyaan xerada oo ay siiyaan ilaa 50 qoys. Waxay cuntada ku soo iibiyaan lacag uu sheegay inay xaafadaha ka soo ururiyaan iyo qeyb ay jeebkooda ka bixiyaan.
Qoysaska sida ay u kala daran yihiin ayay raashinkaas u siiyaan iyagoo si gaar ah u bar-tilmaameedsanaya carruurta iyo haweenka ugu sii nugul. Hase yeeshee wuxuu tilmaamay gargaarkan oo aan dadka ku wada filneyn in uusan sii socon karin waqti badan haddii aan la celin dhaqaale xoog leh oo joogto ah.